Bal Ogow Dhacdooyinkii Ugu Waaweynaa Ee Dhacay Bisha October 2019 Guud Ahaan Isboortiga Soomaaliya – Goobjoog News
October sign lettering
Goobjoog Sports ayaa kuu soo gudbinaysa guud ahaan dhacdooyinkii dhacay bisha October 2019 ciyaaraha Soomaaliya,iyadoo aan horay aqristiyaasheena sharafta badan ugu soo bandhigay bilooyinkii ka horeeyay.
01-October-2019-Madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa hoyga uu ka daganyahay wadanka Masar ku qaabilay ciyaaryahanada Soomaaliya ugu qeyb galay ciyaaraha Golf Pan Arab Championships oo sanadkan lagu qabtay magaalada Qaahira.
02-October-2019-Kooxda Heegan Sports Club ayaa bogooda bulshada ku shaacisay in laacibkeeda qadka dhexe Mahad Maxamed Mahad (Saaha) oo iskaga fariistay gabi ahaan ciyaarista kubbadda cagta.
03-October-2019-Kooxda Degmada Xamar Jajab ayaa mudo dheer ka dib usoo baxay rubac dhamaadka tartanka kubabdda cagta Degmooyinka 2019,xidigaha Xamar Jajajb ayaa 2-1 kaga badiyay kooxd Hodan.
04-October 2019-Degmada Dharkenlay ayaa 8-sano ka dib usoo gudubtay wareega Sem-Finaalka tartanka degmooyinka,ka dib markii ay 1-0 kaga adkaadeen kooxda degmada Shibis wareega sideed dhamaadka.
05-October 2019-Ciyaaryahan Farxaan Cumar oo ka mid ah kooxda PIF ee ka dhisan wadanka Finland ayaa kooxdiisa u soo saaray horyaalka heerka labaad ee Division 2,isagoo sheegay in uu aad ugu faraxsanahay taariikhda iyo guulaha uuu la sameeyay naadiga reer Finland.
06-October 2019-Xulka Soomaalliya ee Taekowndowga ayaa ka qaybgala Riga Open World Championship
07-October 2019-Dagmada Waabari ayaa markii 5-aad oo xiriir ah gaartay finaalaha koobka dagmooyinka Gobolka Banaadir,kadib markii ay ka adkaadeen kooxda dagmada Shangaani kulanka labada dhinac ayaa waqtigii looga talagalay ku dhamaaday barbaro 0-0,hase yeeshee waxaa 4-3 rigoorayaal sanadkii 3-aad oo xariir ah kama dambeysta taranka degmooyinka ku tiigsaday xidigaha kooxda degmada Waaberi.
08-October 2019-Degmada Dharkenley ayaa mudo sideed sano ah ka dib ah u soo baxday fiinalaha tartanka degmooyinka Gobolka Banaadir ,ka dib markii gool ku laadyo 4-2 ah kaga badisay Xamar Jajab.
09-October 2019-Kooxda Heegan ayaa saxaafa usoo bandhigtay in ay soo qaateen goolhayaha kooxda degmada Waaberi u sahlay in ay soo tiigsato fiinalaha tartanka degmooyinka 2019 Cabdiraxmaan Daahir (Abwaanka),isagoo badal u noqonaya laacib Mustaf Maxamed Yuusuf oo kooxda ka tagay.
10-October 2019-Xariirka Kubbadda cagta Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku sameeyay isku aadka koobka sanadaha ee Jeneraal Daa’uud waxaana isku aadka ka qeyb galay madaxda kooxaha Soomaaliya.
11-October 2019-Maamulka dagmada Xamar Jajab ayaa laacib Daadir Amiin Cali u magacaabay guddoomiyaha isboortiga degmada,isagoo kooxda Xamar Jajab mudo dheer ka dib u sahlay in ay soo gaarto Semi-fiinaalka tartanka kubbadda cagta degmooyinka 2019.
12-October 2019-Wasaarada ciyaaraha iyo dhallinyarada,Xariirka Kubbadda cagta iyo guddiga dhismaha garoonka kubbadda cagta Mira Awaare ayaa Puntland kusoo dhaweeyay Injaneerada Samayn-Lahaa Cabirka iyo Naqshadda Rooga Cagaaran ee garoonka waxaana laga wadaa in Puntland ay hesho garoomo casri ah.
13-October 2019-Ciyaartooydii hore kooxda kubbadda cagta Heegan iyo kuwa iminka dheela ayaa kulan saaxiibtinimo ku ciyaaray Muqdisho waxaana kulankaa badiyay halyayadii hore ee naadiga Heegan waxaana kulankan kasoo muuqday Diyeeshe Dheer oo ka mid ah xilidhibaanada Golaha shacabka.
14-October 2019-Kooxda Som United ee ka ciyaarta horyaalka heerka afaraad ee wadanka Sweden ayaa noqotay naadiga 2-aad ee ugu aqlaaqda wanaagsan horyaalka Division Four ee dalka Sweden waxayna arintan dhiiri-gelin iyo hor u socod u noqotay maamulka Som United oo koox Soomliyeed.
15-October 2019-Macallinka reer Uganda ee hogaamiya kooxda Elman Robert Mayang ayaa qaatay diinta Islaam,isagoo sheegay in aad ugu helay habdhaqanka dadka Muslimiinta kusoo biiritaanka diinta islaamka tababaraha Elman waxaa goobjoog ka ah boqolaal qof.
17-October 2019-Injineerada gacanta ku hayo garoonka cayaaraha Cawaale ee magaalada Gaalkacyo ayaa guddiga dhismaha garoonka,Wasaarada Ciyaaraha iyo Xariirka Kubbadda Cagta Puntland u soo bandhigay qaabka ay doonayaan in ay u dhisiyaan garoonka markii ay dhameeyaan howsha iminka ka socota.
18-October 2019-Maamulka Kooxda Elman Sports Club ayaa amaanay macallinkooda reer Uganda Robert Mayanga oo qaatay diinta Islaamka,isagoo sheegay in loo bixiyay magaca Ciise,Maamulka Elman ay howshan ku bogaadiyay saaxiibadii ka shaqeeyay mudadii ay soo socotay sanadihii lasoo dhaafay.
19-October 2019-Garsoorayaasha heerka caalami ee Soomaaliya ayaa dhex Dhexaadiyay kulanka ka tirsanaa tartanka chan wuxuuna kulankaa u dhaxeeyay Xulalka Uganda iyo Burundi,garsoorayaasha kulankaa kasoo muuqday waxa ay kala ahaayeen Xasan Xaaji,Suleymaan Bashir ,Nuur Cabdi iyo Max’ed Nuur.
20-October 2019-Oradyahan Cabdi Lucky oo Soomaaliya orday tartanka Amsterdam Mrathon 2019 ayaa galay kaalinta 13-aad ee kala horeynta,isagoo soo bandhigay tayo sare bilooyinkii laga soo gudbay laacib Cabdi waxa uu ka qeyb galay tartamo kala duwan ee dhinaca oradka kuwaas oo ka kala dhacay wadamada Yurub iyo Africa,isagoo sanada soo aadan rajaynayo in uu gaaro kaalama sare oradka caalamka.
21-October 2019-Tartanka Kubbadda Cagta Jeneraal Daa’uud 2019 ayaa ka furmay caasimada Muqdisho waxaana kulankii furitaanka wada dheelay kooxaha Gaadiidka iyo Badbaado,iyadoo furitaanka ay ka qeyb galeen maamulka Xariirka kubbadda cagta Soomaaliya iyo madax ka socotay ciidan xoogga dalka.
22-October 2019-Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa dhismaha iyo dib u dayactirka garoonka kubbadda cagta Bosaaso ugu deeqay lacag dhan $200,000 waxaan arintan soo dhaweeyay Xariirka Kubbadda cagta Puntland iyo bahda ciyaaraha.
23-October 2019-Kooxda Dowladda Hoose ee Muqdisho City Club ayaa shan ka dib guushii ugu horeesay ka gaartay naadiga Dekeddaha,kulamadoodii kowaad ee tartanka sanadlaha ee Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xirse waxaana goolka qura ay ku badiyeen u dhaliyay laacibkooda Feysal Axmed Xasan.
24-October 2019-Maamulka Kooxda Heegan Sports Club ayaa shaaciyay in ay dib naadiga ugu soo celiyeen laacibkooda qadka dhexe Mahad Maxamed (Saaha) uu horaantii October 2019 sheegay in uu gabi ahaan ka fariistay ciyaaraha kubbadda cagta.
25-October 2019-Kooxaha Kubbadda cagta Horseed iyo Elman oo wada ciyaaray is aragoodii kowaad ee tartanka Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xirse ayaa ku heshiiyay barbaro goolal la’aan,iyagoo ku jira Group B.
26-October 2019-Injaneer gacanta ku haayo dhismaha garoonka Cawaale ee magaalada Gaalkacyo ayaa soo bandhigay dhaqshada iyo qaabka ay doonayaan in uu ekaado markii ay dhamaayeen howlaha iminka ka socdo waxaan sawirro muujinaya naqshadeentiisa lagu soo bandhigay barabraha bulshada.
27-October 2019-Xulka dalkeena Soomaaliya ayaa horomar wanaagsan iyo kobac kasoo sameeyay dhinaca kale horenta qiimeeynta FIFA,isagoo soo galay kaalinta 198 maadam uu haray xulkeena Soomaaliya looga bartay kaalama 202 iyo wixii ka hooseeya,balse arintan ayaa ku timid da’daalada wanaagsan ay muujiyeen.
28-October 2019-Yoonis Cabdirashiid Egag oo ah weeeryahanka kooxda Som United ee ka ciyaarta horyaalka heerka afaraad ee wadanka Sweden ayaa ku guulaystay gool dhalinta horyaalka fasal ciyaareedkan 2018-2019,isagoo dhaliyay 17-gool 18-kulan oo uu dheelay wuxuuna ka mid yahay laacibtiina ugu tayada wanaagsan ee ka dheela dhinac weerarka wadanka Sweden.
29-October 2019-Guddoomiyaha Xariirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta Cabdiqani Saciid Carab iyo guddoomiye ku xigeenka 1-aad Cali Cabdi Maxamed ayaa kormeer ku tagay tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho,iyagoo sheegay in ay madaxda Dowladda Soomaaliya ay shaqo wanaagsan ka qabteen dib u dhiska garoonka Muqdisho Stadium mudadii ay gacanta ku haysay.
30-October 2019-Maamulka Gobolka Banaadir ayaa xariga ka jaray xafiiska naadiga Dowladda hoose ee Muqdisho City Club,Furitaanka xafiiskan waxaa ka qeyb galay mas’uuliyeen ka socotay Gobolka Banaadir,Xariirka Kubbabadda Cagta ,macallimiinta iyo taageerayaasha naadiga.
31-October 2019-Yoonis Cabdirisaaq Faarax ayaa kooxda reer Norway ee Trysil kula guulaystay horyaalka heerka afaraad ee dalka wuxuuna ka mid ahaa xidigihii kaalinta wanaagsan ka qaatay labadii kulan ee xulka Qaranka la dheelay dhigiisa Zimbabwe bishii September 2019.
Halkan Ka Daawo Warbixin Ku Saabsan Dhacdooyinka Bisha October 2019 Oo Muuqaal Ah
Koonfur Galbeed Iyo Puntland Oo U Gudbay Wareega Afar Dhamaadka Tartanka Kubbadda Cagta Maamul Goboleedyada Iyo Gobolka Banaadir
Hello, row-boat thanks you http://cialisxtl.com in appreciation to tidings! free cialis medication for providers
Amoxicilline Qualimed 250 Mg Clomid Et Fertilite [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Doryx Apo
can you order cialis cialis on sale ordering cialis online legal
cheap cialis australia tadalafil vs cialis buy cialis mastercard
order cialis uk http://tadal24ph.com – tadalafil order levitra online cod
Zerpbb tueybr Buy cialis without rx cialis super active
Wkimrd nmonqc viagra prices where to buy cialis online
Yovzfl dlulzd viagra prices canadian pharmacy cialis
viagra coupon buy viagra from canada canadian pharmacy generic viagra
best ed treatment pills Cheap Erection Pills best ed drug
ed pharmacy ED Pills ed meds online
generic ed pills ED Pills online ed drugs
ed help cheap medication online cheap medications
ed pharmacy ed pills online pharmacy natural ed treatment
ed dysfunction treatment online prescription for ed meds online medication
can ed be reversed https://sildenafilxxl.com/ viagra no prescription
is generic cialis safe cialis online walgreens price for cialis 20mg
ed cures online canadian pharmacy medications for
new ed drugs canadian drug stores cheap medications online
viagra online canadian pharmacy viagra without a doctor prescription canada viagra cialis
how much will generic viagra cost buying viagra online cheap viagra online
viagra no prescription online viagra viagra doses 200 mg
canadian pharmacy viagra mexican viagra viagra pill
cheapest generic viagra https://genericvgr100.com order viagra online
which is better – cialis or viagra generic cialis online legitimate cialis by mail
amazon viagra how much viagra should i take the first time? how to buy viagra
treating ed canada drug pharmacy approved canadian online pharmacies
alesse 28 buy online alesse coupon alesse buy
prescription drugs https://canadianpharmacyvikky.com best cure for ed
ventolin brand ventolin pharmacy australia
us pharmacy canadian pharmacies online canadian pharmacy reviews
online drugstore peoples drug store erectile dysfunction
thrifty drug store http://pharmacy-onlineasxs.com/ pharmacy express
buy sildenafil http://sildenafig.com/ cheap erectile dysfunc...
Р“РћРЎРў 25557-2016 РљРѕРЅСѓСЃС‹ РёРЅСЃС‚СЂСѓРјРµРЅС‚Р°Р»СЊР...
clexane prednisone ivf [url=https://prednisonetf.com/]buying...
РќРѕСЂРјР°Р»СЊРЅС‹Рµ СѓРіР»С‹ Рё РєРѕРЅСѓСЃС‹ РёРЅСЃС‚СЂСѓРј...
methylprednisolone vs prednisone equivalent [url=https://pre...